Jiri Google Earth mepụta uzo | Martech Zone
Jiri Google Earth wuo uzo
Saturday, March 17, 2007 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
The Indianapolis Cultural nzọ ụkwụ bụ Legacy nke Gene & Marilyn Glick. Uzo Omenala bu uzo ndi obodo mepere emepe na uzo ndi mmadu na-ejikọ ndi agbata obi, Omenala Omenala na ihe eji eme obi uto, ma na-eje ozi dika ogbe ndi mmadu n’etiti obodo Indiana. Ọ bụ ọrụ dị egwu na-agbanye mgbọrọgwụ ebe a.
Mgbe mụ na Pat Coyle na-ekwu okwu, echere m na ọ ga-adị mma ma esite n'okporo ụzọ ọdịnala tinye ya na Google Map ka ndị mmadụ nwee ike ịmekọrịta Google Earth (Cannwere ike ibudata ya n'efu) ma ọ bụ lee ya na weebụsaịtị.
Iwuli uzo maka Map Google nwere ike itu ujo, mana Google Earth o di nfe. You nwere ike iji toolzọ ngwá ọrụ
ịmepụta ụzọ. Pịa akụrụngwa ụzọ wee pịa ebe ụzọ gị malitere na njedebe. A ga-adọta otu akara. Ntughari ọ bụla ga-emepụta etiti. O nwere ike ịbụ ụdị aghụghọ (ctrl-click na-ehichapụ isi), mana ị nwere ike ịmepụta ngwa ngwa na maapụ. Ọ bụrụ na ị pịa aka nri na oyi akwa gị na sidebar, ịnwere ike ịgbakwunye nkọwa, gbanwee ọdịdị na mmetụta nke oyi akwa gị, ọbụnakwa setịpụ elu.
Site na Google Earth, ị nwekwara ike ịtọtọ ala ahụ ma gbanye ụda nke ọkwa ndị ọzọ ma gbanyụọ. Ngwaọrụ dị n'elu aka nri na-enye gị ohere mbugharị, tugharịa, gbanwee echiche gị, tụgharịa, na ịgbanwe elu. Ujiji nke ngwa a bu ihe omimi!
Na Disemba, Google Maps gbakwunyere nkwado KML na API ha, ya mere ị nwere ike mfe wepụta ọkwa gị dị ka faịlụ KML ma tụọ ya Maapụ Google.
Nakwa, ịnwere ike ide akwụkwọ ma bulite ọkwa gị maka ndị folks iji chọpụta ha. Emebeghị m nke ahụ, mana m ga-abịa n'oge na-adịghị anya! Akụkụ mbụ nke ọrụ a bụ ịmepụta ụzọ. Otu ụzọ aghụghọ - emeghere m ihe oyiyi nke Usoro Omenala ma webata ya na Google Earth. Etinyere m ya ihe dịka pesenti 30 nke nghọta ma were ya ka ọ bụrụ nlele iji maapụ ọsọ ọsọ.
Akụkụ ọzọ nke ọrụ a ga-ewu maapụ mmekọrịta yana igwe nrụaka na isi na popups nke onyonyo. Ihe dị jụụ!
Mkparịta ụka Blog kachasị mfe You'll ga-ahụ ebe ọ bụla!
Ọ bụ n'ezie "Amamihe nke igwe mmadụ"?
Nke a bụ teknụzụ dị ịtụnanya n'ezie. Mapquest amalitebeghị itinye nyocha satịlaịtị na map.
Nwee ụfọdụ oge ị ga-eji mee nchọnchọ iji hụ ma anyị nwere ike iji nke a n'ime sistemu njikwa omume. Ọ ga-adị mma ịnweta ụzọ nke ụzọ ndị ahịa maka ndị ndụmọdụ anyị.
Ntuziaka bụ njirimara Google Maps API na nso nso a ka enwere ike iji ya mepụta faịlụ mpụga nke dị na Google Earth. Usoro njikarịcha (isi 2 +) bụ obere esemokwu siri ike. Enwere ụfọdụ ndị na-ere ahịa n’ebe ahụ na-eme ya nke ọma Uteszọ okporo ụzọ mana ahụbeghị m API ma ọ bụ sọftụwia ọ bụla dị ka mmejuputa Ọrụ.
Ekwenyesiri m ike na nke ahụ dị n'akụkụ nkuku ebe! 🙂
Ekwenyere m - ọ dị ịtụnanya!
Mar 31, 2007 na 8: 16 AM
Doug, Nke ahụ dị mma. Daalụ maka ịkekọrịta! Enwetụbeghị m ọdụ iji chọpụta ihe a, mana ọ dị ka ohere ọ nwere enweghị njedebe. Otu ihe m nwere ike ịhụ ozugbo nke ahụ ga-ere bụ itinye google maps na mwepu ahazi na saịtị ndị ahịa.
Mar 31, 2007 na 8: 27 AM
Kpamkpam, Ian! Mụ na map a ka na-ekpori ndụ. Enwere m ike ịgbakwunye ọchụchọ, tinye usoro akara 'ọrụ onwe onye', tinye ntụgharị, na abunch nke atụmatụ ndị ọzọ. Lelee Adreesị Adreesị maka atụ ọzọ. Enwere m olileanya ịnweta saịtị nkewa mmekọrịta enwere izu a.
BTW: Ebe dị egwu ma na-atụ anya izute gị. Anyị enweela netwọkụ ndị ọkachamara ‘rụrụ arụ’ ebe a na Indy na anyị na-arụ ọrụ iji nyere ọtụtụ ndị ahịa aka. Anyị nwere ike ị nweta gị na ngwakọta!
Mar 31, 2007 na 10: 52 AM
Achọpụtara m gbasara gị Ade, enyi m. Ọ dị mma izute ndị ọzọ dịka m.
Otherbọchị gara aga m nọ na-enyocha GMap EZ, ederede ntinye dị mfe iji tinye Google MAP API n'ime ibe weebụ: http://www.n-vent.com/googlemaptest
Ọ bụ mara mma stof.
Mee 31, 2009 na 5: 52 AM
O di nwute na Google Earth na-efu ihe: mgbe ị mepụtara ụzọ, ọ dịghị ụzọ dị mfe iji tụọ ogologo ya.
Luckily, M edozi nsogbu a! Ọ bụrụ na ịchekwaa ụzọ dị ka faịlụ .kmz ị nwere ike bulite ya na weebụsaịtị m ma ọ ga-agwa gị ogologo ụzọ ahụ. Lee njikọ:
Jun 4, 2009 na 4: 59 PM
Achoputara m na ihe m bugoro na akwukwo gbajiri, ma edozi m ya. Emekwara m ya ka ị nwee ike bulite faịlụ .kmz ma ọ bụ faịlụ .kml. Ọzọkwa, nke a bụ njikọ iji chọta ogologo ụzọ Google Earth gị: